Forex Trading Calculators | Margin, Pip, Pivot ary Toetoetrany
Home / Trading / Forex Tools / Forex Calculators
Range of Calculator Forex
Manamboatra karazana kalkresokana tsy manam-paharoa izahay izay hanampy ny fampisehoana ataonay. Ny tsirairay dia nomanina tsara tamin'ny filàn'ny mpivarotra eo am-piandohan'ny tanjon'ny fampandrosoana. Ao anatin'io fanangonana io dia: kalkulator-toerana, marika calculator, calculator pips, pivot calculator ary calculateur currency. Ilaina ny hahalalan'ireo mpihazakazaka amin'ny tenany amin'ny karazana kalko maromaro, satria afaka manampy ny fampandrosoana ny drafitra sy ny paikady ara-barotra izy ireo, miaraka amin'ny risika sy ny fijerena ny loha-hevitra amin'io drafitra io. Ireo kalkadora ireo dia afaka manampy ireo mpivarotra mba hisorohana ny hadisoana fototra, ohatra; Ny toeran'ny misterina amin'ny sombin-tany iray dia mety hampitombo ny tahan'ny varotra.
Ny fitaovana tsy azo antoka hifehy ny tsena entinao amin'ny raharaham-barotra rehetra, ity fahafaha-manao ity dia mamela anao manokana ny marika ilainao mba hametrahana varotra ho eny an-tsena.
Sandam-bola Miaraka tsiroaroa
ohatra: raha te hanakalo ny vola EUR / USD, amin'ny vidin'ny 1.04275 ianao, amin'ny haben'ny varotra 10,000 *, amin'ny fampiasana 1: 200 dia mila $ 52.14 ianao ao amin'ny kaontinao mba handrakotra izany hatsiaka.
* ny iray dia mitovy amin'ny singa 100,000.
Ity fitaovana tsotra ity dia hanampy ireo mpivarotra, indrindra fa mpivarotra vaovao, amin'ny famenoana ny pips amin'ny varotra.
ohatra: Ampiasaintsika indray ny ohatra ananantsika EUR / USD; raha te-handany vola EUR / USD amin'ny ankapobeny, amin'ny vidin'ny 1.04275, amin'ny haben'ny varotra 10,000, dia mitovy amin'ny pip. Noho izany dia mety hampidi-doza iray ianao.
Maro ireo sehatra varotra varotra no manisa ny teboka isan-karazany isan'andro, miaraka amin'ity fitaovana hividianan-tsolika ity afaka manisa ny pivotany manokana; ny teboka isan'andro, ny fanoherana sy ny fanohanana. Ampidino fotsiny ny haavon'ny andro teo aloha, ny ambany sy ny vidin-koditra ho an'ny fiarovana. Ny kalkulator dia mamaritra avy hatrany ireo teboka isan-karazany. Ireo sehatra manan-danja ireo dia hevi-dehibe izay ahafahan'ny mpivarotra maro mihevitra ny tenany, angamba amin'ny resaka: fidirana, fijanonana ary mandidy ny fetran'ny fetrany.
Ny fitaovana iray hafa tena ilaina amin'ny mpivarotra efa za-draharaha na mpivarotra, ity kalkul ity dia tena ilaina amin'ny fitantanana ny mety hampidi-doza ny varotra sy ny fanaraha-maso ny fitomboanao amin'ny tsena.
ohatra: Indray mandeha indray mampiasa mpivoy vola EUR / USD. Te-hizara 1% ny kaontinao ianao isaky ny varotra. Te-hijanona fotsiny ianao fa 25 dia manalavitra ny vidiny amin'izao fotoana izao. Manana kaontim-kaonty $ 50,000 ianao, noho izany dia hampiasa lanjan'ny lanjany roa ianao. Raha ny marina, mety hampidi-bola ny $ 500 amin'ny varotra ianao, raha tokony halefa ny fatiantoka hijanona dia ho very izany.
Angamba ny tsotra sy tsy isalasalana fa ny mahazatra indrindra amin'ny fitaovam-pandraharantsika, ny mpikirakiran'ny vola dia manome ny mpivarotra mety hampiova ny volany any amin'ny vola hafa.
ohatra: Raha te-hivadika 10,000 ho $ 10,000 ny valiny dia 10,437.21USD. Noho ny antony 1 EUR = 1.04372 USD sy 1 USD = 0.958111 EUR.
Ireo kajy ireo dia azo amin'ny alalan'ny Traders Hub ho an'ny tompon'ny kaonty FXCC.
Fidio ny hidirana amin'ny FREE trading tools
Mba hampiharana ny fitaovana maimaim-poana azonao, dia midira tsotra fotsiny ao amin'ny Traders Hub
Terms & Conditions ary manaova ny fangatahanao.